Angeragō Hia: Efitrano Fanjakana Vaovao ao Amin’ny Nosy Nias
TANTARANY Nody tany an-tanànany tany amin’ny Nosy Nias, ary nanampy tamin’ny fanorenana Efitrano Fanjakana.
NAHENO vaovao tsara be ilay fiangonana kelinay eto Tugala Oyo, tamin’ny 2013. Hahazo Efitrano Fanjakana vaovao izahay! Neken’ny manam-pahefana ilay tetikasa. Nanaiky hanao sonia koa ny 60 tamin’ny mpiray tanàna taminay mba hanaovana an’ilay izy. Hoy ny iray tamin’izy ireo: “Na sonia 200 aza no ilainareo dia ho azonareo izany.”
Mpiasa an-tsitrapo roa efa za-draharaha no nanara-maso ny fanorenana an’ilay efitrano, ary vita tamin’ny Novambra 2014 ilay izy. Tsy nieritreritra mihitsy izahay hoe hahazo efitrano tsara tarehy hoatr’izao. Nitahy anay mihoatra noho ny noeritreretinay i Jehovah!